Shuruudaha iyo Xaaladaha Bonus |
Bonus Shuruudaha & Xaaladaha
£ 5 Free Terms Bonus Diiwaangelinta iyo Xaaladaha
horumarinta Tani waa kaliya ay heli karaan dadka haysta ansax account cusub da'doodu 18 ama ka badan.
bonus ayaa saarnaan doonta xisaabaha cusub xaqiijinta guul cinwaanka email ee lagu siiyay. kayd No waxaa looga baahan yahay.
Waxay qaadan kartaa ilaa 10 daqiiqo bonus in la tixgalinayo.
Kaliya hal bonus per macaamiisha casino.
Bonus waa ansax 28 maalmood ka dib credit. Ka dib wakhtigan, bonus ka joogsan doonaa in ay ansax ah iyo lacag haray laga saari doonaa xisaabtaada.
Tani waa dalab ka 2nd January heli karaa 2015 ilaa ogaysiis dambe.
bonus Taas waxay keenaysaa shuruud 100x wagering. The £ 5 waa in la wagered ugu yaraan 100 jeer ka hor bixitaanka a waxaa la samayn karaa. Sidaas waxaad u baahan tahay inaad sharad 100 x £ 5 = £ 500 ka hor inta aadan ka bixi kartaa gunno.
guuleystayna ugu badan ka bonus this la saftay doonaa £ 20. Taas macnaheedu waa in keliya ugu badnaan £ 20 waxaa lagu dari doonaa dheelitirka aad withdrawable. dheelitirka kasta oo ka hartay iyo aad lacagtaas dul wagering guul lagu inaysan ansax ahayn doonaa.
bonus Tani kaliya loo isticmaali karaa inuu u ciyaaro mid ka mid ah kulan booska our.
bixitaanka Ugu Yar waa £ 10. Ciyaartoyda waa inay iska diiwaan kaarka lacag bixinta oo sax ah, ujeeddo ah baxaan.
Management xaq u leedahay inay hanato bonus haddii macaamiisha waxaa la helay in la halleynaya ama aflagaadeeyay dhinac kasta ee horumarinta this.
Bonus Deposit Welcome - kulan deposit bonus Shuruudaha iyo Xaaladaha
Deposit The dalab Welcome waa kaliya ay heli karaan dadka haysta ansax account cusub da'doodu 18 ama ka badan iyagoo u horeysay 3 kayd nala.
The kulan deposit soo socda waxaa laga heli karaa:
1st deposit – 200% lacagta caddaanka ah ilaa ciyaarta inay £ 50 ku bonus.
2nd deposit – 100% lacag-kulan ilaa bonus in £ 200 ee bonus
3deposit rd – 50% lacag-kulan ilaa bonus in £ 250 ee bonus
Si aad xaq u leedahay gunno ah Welcome, ciyaaryahano waa ku shubi / wareejiyo ugu yaraan £ 10 Waayo, mid kasta oo ka mid ah seddexdii kulan ee deposit.
lacag Bonus qaadaan shuruudda wagering of 40x a qiimaha ku habboon ee lacagta deebaajiga iyo gunnada hore siiyay.
Marka lagu tiriyaa aad gunno weli aan dhicin, waayo, 28 maalmood. Miyaanay ahayn in aad buuxiso shuruudaha wagering in muddo this ee, lacag haray laga saari doonaa xisaabtaada.
mid bonus oo kaliya uu noqon karaa mid firfircoon wakhti. Haddii aad qabto ah dheelitirka bonus Active jira horeba, bonus this waxaa lagu dari doonaa in aad safka bonus raco. Fadlan u tag “my account” qaybta si aad u aragto oo dhan safka bonus.
Halkee macaamiisha codsado bixitaanka ama kala iibsiga ka mid ah account ciyaaraha ay, ka hor looga baahan yahay wagering loo baahdo la kulmay, waayi doonaan bonus oo guuleystayna oo dhan u sabab ah akoonka. Kaliya wadarta deposit asalka ama dheelitirka of deposit asalka haray noqon doonaa withdrawable.
Halkee dheer mid ka mid ah dalab ama horumarinta la jebiyo ama ay jirto caddayn kasta oo taxane ah oo khamaar ah kaalinta by macaamiisha ah ama koox macaamilo ah, taas oo ay sabab u tahay gunno deebaaji, lacagaha lagu hormariyo, khamaar ah oo lacag la'aan ah ama wax kale oo xayaysiis dalab natiijada in faa'iidada macaamiisha damaanad eegin natiijada, in qof qof ahaan ama qayb ka mid ah koox, Management xaq u leedahay inay hanato element bonus ee khamaar ah sida ku. Waxaan dheeraad ah xaq u leeyihiin inay ka codsan macaamiisha kasta si ay u bixiyaan caddeyn ku filan noo dhergi sida in aqoonsiga qofka macaamilka ah ee our digtoonaan buuxda ka hor noo aqoonsashada kuwa bonus kasta, bet bilaash ah ama dalab ay account.
All dalabyo sida loogu talagalay ciyaartoyda madadaalada iyo Management laga yaabaa in ikhtiyaarka kaliya xaddido xaq u yeelashada ee macaamiisha in ay ka qayb qaataan dhammaan ama qayb ka mid ah horumarinta wax.
All dalabyo macaamiisha waxaa ay ku koobnaanayaan qofkiiba hal, qoyska, cinwaanka guriga ku nool, cinwaanka emailka, lambarka telefoonka, lambarka xisaabta isku-bixinta (e.g. debit ama credit card, iwm), iyo computer la wadaago, e.g. maktabada dadweynaha ama goobta shaqada. Waxaan xaq u leeyihiin inay ka baxaan helitaanka dalab kasta ama dhammaan dalabyo macmiil kasta ama koox macaamilo ah waqti kasta oo aannu lasameeyay kaliya oo waadaxa leenahay. Waxay bixisaa dalban oo kaliya in ay macaamiisha kuwaas oo sameeyey / deposit lacag dhab dhabta ah la noo casino
Management xaq u leedahay inay isticmaalaan magaca hore, hore ee Magaca awoowe, naanays iyo / ama dalka ama magaalada uu deggan yahay ee wixii ogeysiin xayaysiis, qaata gunno wax dhiirrigelin iyo hawlaha kale marketing, haddii on Service ama meelo kale.
Waxaad dooran-out laga yaabaa in la helo dallacsiinta iyo isgaarsiinta dhiirrigelin la xiriira adigoo la xiriiraya taageero macaamiisha.
Shaqaalaha, saraakiil iyo agaasimayaasha Nektan Ltd, hay'adaha ay xayaysiinta ama wax kale, shatiga iyo fasaxa siisay, bixiyeyaasha adeegga iyo wixii shirkadaha kale ee la xiriira ama xiriir ma yeelan doonaan xaq u dallici. Ereyada isku codsan doonaan in ay qoysaska si toos ah dadka sida.
Inkastoo ciyaartoyda la siin karaa gunno badan, kaliya hal bonus waa firfircoon on xisaabtaada wakhti kasta. Miisaanku bonus bandhigay waa dheelitirka ee bonus firfircoon oo kaliya. The xidhmooyin bonus oo dhan waxaa lagu arki karaa in aad “my account” qaybta.
Shuruudaha iyo Xaaladaha of £ 5 Bonus Welcome Free